डोनाल्ड ट्रम्प र अमेरिकी ‘सफ्ट पावर’को गिरावट | Ratopati
personएजेन्सी exploreअमेरिका access_timeफागुन २, २०७४ chat_bubble_outline0
एजेन्सी– सबुत स्पष्ट छ । डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति पदले अमेरिकी सफ्ट पावर कम भएको छ । ग्यालपद्वारा १३४ मुलुकमा हालै गरिएको मत सर्वेक्षणमा ३० प्रतिशत मानिस मात्र ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकाको पक्षमा थिए । यो आँकडा बाराक ओबामाको राष्ट्रपतित्वकालयता करिब २० अङ्कको गिरावट हो । प्यू रिसर्च सेन्टरले ३० प्रतिशत अनुमोदन रेटिङसँगै चीन करिब अमेरिकाको निकट पुगेको जनाएको छ । साथै बेलायती सूचकाङ्क ‘दि सफ्ट पावर ३०’ ले पनि अमेरिका सन् २०१६ मा पहिलो स्थानबाट चिप्लिएर गत वर्ष तेस्रो स्थानमा पुगेको देखाएको छ ।
ट्रम्पको प्रतिरक्षा गर्नेहरू सफ्ट पावरले कुनै फरक नपर्ने जवाफ दिन्छन् । ट्रम्पका बजेट निर्देशक मिक मुलभेनीले स्टेट डिपार्टमेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी एजेन्सीका लागि ३० प्रतिशतले बजेट कटौती गरेर ‘हार्ड पावर बजेट’ को घोषणा गरे । बाँकी विश्वले अमेरिकालाई दोस्रो स्थानमा रहेको मानेको बेला ‘अमेरिका पहिलो’ का प्रवद्र्धकहरूका लागि के तिनीहरू सही छन् ?
सफ्ट पावर जबरजस्ती वा भुक्तानीको सट्टा आकर्षणमा निर्भर हुन्छ । यसले मानिसहरूलाई दबाव दिनुको सट्टा सहकार्य गर्दछ । व्यक्तिगत स्तरमा बुद्धिमान बाबुआमा केवल नयाँ, सुविधा वा कारको चाबीहरू हटाउनमा निर्भर हुनुको सट्टा आफ्ना बच्चाहरूका लागि आदर्श नैतिक मूल्यहरूको मोडेल बन्न सकियो भने आफुहरूको शक्ति धेरै हुनेछ र धेरै समयसम्म रहनेछ भन्ने कुरा जान्दछन् ।
ठीक त्यसैगरी राजनीतिक नेताहरूले लामो समयसम्म सत्तालाई बुझेका हुन्छन्, जुन एजेन्डालाई निर्धारण गर्न र बहसका लागि रूपरेखालाई निर्धारण गर्नमा सक्षम हुन्छ । म चाहनाका लागि तपाइँबाट जे प्राप्त गर्नसक्छु त्यही चाहन्छु भने तपाइँ जे चाहनुहुन्न मसँग त्यसका लागि दबाव दिने केही हुँदैन । एउटा मुलुकको सफ्ट पावर मुख्यरूपमा तीनवटा स्रोतबाट प्राप्त हुन्छः उसको संस्कृति (जब यो अन्यका लागि आकर्षक हुन्छ), प्रजातन्त्र र मानवअधिकारजस्ता उसको राजनीतिक मूल्यहरू (यदि ऊ तिनीहरूसँग बस्छ) र उसका नीतिहरू (तिनीहरू वैध भएको देखिन्छन, किनकी अन्यका हितहरूको बारेमा जागरुकता र केही नम्रताका साथ तिनीहरू आफुलाई तयार बनाउँछन्) ।
एउटा सरकारले घरमा (उदाहरणका लागि स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षण गरेर), अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा (अन्य र बहुपक्षीयवादसँग परामर्श गरेर) र विदेश नीतिमा (विकास र मानवअधिकारको प्रवद्र्धन गरेर) कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा उसको उदाहरणीय कार्यको प्रभावले अरुलाई प्रभावित पार्नसक्छ । यी सबै क्षेत्रमा ट्रम्पले आकर्षक अमेरिकी नीतिहरूलाई उल्ट्याएका छन् ।
अमेरिकालाई अलोकप्रिय बनाउने इराक युद्ध सरकारको पहिलो नीति थिएन । सन् १९७० को दशकमा भियतनाममा अमेरिकी युद्धप्रति विश्वभरका कयौँ मानिसले आपत्ति जनाएका थिए र अमेरिकाको विश्वव्यापी अडानले त्यो नीतिको अलोकप्रियकरणलाई प्रतिबिम्बित । जब नीति परिवर्तन भयो र युद्धका सम्झना कम हुँदै गयो अमेरिकाले उसको हराएको सफ्ट पावर बहुत अधिक पुनःप्राप्त गर्गो । त्यसै गरेर इराक युद्धपछि विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा अमेरिका उसको सफ्ट पावर हासिल गर्न सफल रह्यो । यद्यपि मध्यपूर्वमा त्यति धेरै हासिल भएन ।
अमेरिकी सफ्ट पावरको उदय र पतनले धेरै कुरामा फरक पार्दैन भनेर शङ्कालुहरू अझै तर्क दिनसक्छन्, किनकी मुलुकहरू आत्म–हितबाट सहकार्य गर्छन् । तर यो तर्कले एउटा महत्वपूर्ण विन्दुलाई गुमाउँछः सहकार्य डिग्रीको कुरा हो र डिग्री आकर्षण वा विकर्षणबाट प्रभावित हुन्छ । यसका अतिरिक्त कुनै मुलुकको सफ्ट पावरको असर गैर–राज्यका खेलाडीसम्म विस्तार हुन्छ । उदाहरणका लागि आतङ्कवादी सङ्गठनहरूबाट सहयोग वा भर्ती गरेर । सूचनाको युगमा कसैको सेनाको जीतमा मात्र निर्भर हुँदैन कसैको कथाको जीतमा पनि हुन्छ ।
(जोसेफ एस. ने अमेरिकी पूर्व रक्षामन्त्री हुन् । उनी हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर समेत हुन् ।) अनुवादः दिलीप अधिकारी